UNSOM oo Uganda ka dalbatay ciidamo dheerad ah oo ilaalaya xafiisyadeeda Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
UNSOM oo Uganda ka dalbatay ciidamo dheerad ah oo ilaalaya xafiisyadeeda Muqdisho
Mareeg.com: Wakiilka Qaramada Midoobe ee Soomaaliya, Nicholas Kay ayaa dowladda Uganda ka codsaday inay kordhiso Ciidamada Ilaalada Qaramada Midoobay ee ku sugan Muqdisho, kuwaasoo dhammaantood ka socda dalkaasi.
Uganda waxay sanadkii tagey ay Soomaaliy u soo dirtay ilaa 400 oo askari, kuwaa oo si gaar ah kaga hawlgala Xarumaha Qaramada Midoobay ku lee dahay Magaalada Muqdisho.
Nicholas Kay oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdiso, ayaa sheegay in Qaramada Midoobay ay ballaarisay hawlgalkeeda Soomaaliya, sidaasi daraadeedna loo baahday in la kordhiyo Ciidamada Ilaalada ee Xafiisyada UN-ka ee Muqdisho.
“Hawlgalka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waanu ballaarinay, sidaasi daraadeed waxaa loo baahan yahay in la kordhiyo Ciidamada Ilaalada Qaramada Midoobay, ee ku sugan Xarunta Xalane iyo agagaaraha Garoonka Aadan Cadde.” ayuu yiri Nicholas Kay.
“Ciidamadaan waxay ilaalin doonaan oo ay ka hawlgalayaan Xarumaha Qaramada Midoobay ku lee dahay Magaalada Muqdisho, maadaama aanu hawlgalka ballaarinay waa in la kordhiyaa Ciidamada Ilaalada ee Xafiisyada Qaramada Midoobe.” ayuu markale yiri.
“Dowladda Uganda waxaan ka codsaneynaa inay soo kordhiso Ciidamadeeda Ilaalada Xafiisyada Qaramada Midoobe ee Magaalada Muqdisho, si ammaanka loo xaqiijiyo.” Nicholas Kay ayaa sidaa yiri.
“Hadda khatar badan oo xagga ammaanka ah kama jirto Magaalada Muqdisho, hadana waxaa loo baahan yahay in markasta taxadar la sameeyo.” ayuu hadalkiisa ku soo gaba gabeeyay.
Xarrumaha Qaramada Midoobay ee Muqdisho ayaa waxaa horay u ilaalinayey ciidamo xiran koofiyadda UN oo ka socda Uganda, hase ahaate waxaa muuqaata in xafiiska UNSOM ay la yaraatay tirdada ciidamadaas oo gaaraya ilaa 400.
Maxey ka wada hadleen madaxweyne Xasan iyo madaxda 3 maamul goboleed?